लाभासको सिजनमा झन्डै २ प्रतिशतले बढ्यो बजार; अब के गर्ने ? - Lagani News
Home Share लाभासको सिजनमा झन्डै २ प्रतिशतले बढ्यो बजार; अब के गर्ने ?
लाभासको सिजनमा झन्डै २ प्रतिशतले बढ्यो बजार; अब के गर्ने ?
Published: Wednesday, September 5, 2018 2018-09-05T02:39:00-07:00
Santosh Raj Bajgain September 05, 2018 Share,
लगानीन्युज/काठमान्डौ : आज समेत गरी नेप्से परिसूचक लगातार ५ कारोवार दिन देखि बढ्दै आएको छ। आज नेप्से परिसूचक मंगलबारको तुलनामा १ दशमलव ९७ प्रतिशत (२३ दशमलव ८९ अंक) वृद्धि भएर १२३४ दशमलव १३ को विन्दु मा बन्द भएको छ। आज दिन भरीमा बजार १२४३ को उच्च विन्दु सम्म पुगेकोमा बन्द हुदाँ भने १२३४ को विन्दुमा बन्द भएको छ।
आज कारोवार रकमपनि निकै राम्रो संग वृद्धि भएको छ। आज दिन भरमा ७० करोड ८८ लाख बराबराको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज सबै भन्दा धेरै कुमारी बैंक लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कुमारी बैंकको ४ करोड ९० लाख बराबरको शेयर खरिद बिक्री भयो।
धेरै कम्पनीहरुले लाभास प्रस्ताव गर्ने क्रम सुरु भएकोले बजारले सकारात्मक दिशा समातेको पाईन्छ। लाभास खाने बेलामा शेयर बजारले यस प्रकारको र्याली समात्नु सकारामक रहेको जानकार बताउछन ।
By Santosh Raj Bajgain - September 05, 2018
"जिम्मेवारीबाट म कहिल्यै पछि हट्ने छैन"; राधा पोखरेल
लगानीन्युज/काठमाडौँ : श्रावणको पहिलो साता जन्मिएको नेपाल पूंजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेल एक सक्रिय लगानीकर्ता हुन्। शेय...
समता माईक्रोफाईनान्सले कति गर्यो बोनस र नगद लाभास प्रस्ताव ?
लगानीन्युज/काठमाडौँ : समता माईक्रोफाईनान्सको ६७ औ संचालक समितिको बैठकले लाभास प्रस्ताव गरेको छ। १० प्रतिशत बोनस र कर सहित ११ दशमलव ०५...
सिद्धार्थ बैंकको बुक क्लोज मिति तय
लगानीन्युज/काठमान्डौ : सिद्धार्थ बैंकले १७ औ वार्षिक साधारण सभा यही पुस २३ गते गर्ने भएको छ। बैंकले साधारण सभामा ५ प्रतिशत बोनस शेयर...